Safaaradaha Sweden maxay baasaboorka soomaliga u dalbadaan? | Somaliska
Su'aashaan waxay ka mid ahayd suaalo aan waydiiyay Laanta Socdaalka Sweden wareysigii ugu dambeeyay ee aan la yeeshay balse Laanta Socdaalka ayaysan u suurto galin in jawaabta siiyaan xiligaas ayagoo balan qaaday in ay dib iga siin doonaan jawaabta. Hadaba jawaabtii ayay ii soo direen ayagoo u sharaxay sidatan...
Baasaboorka Soomaaliga looma aqoonsana dukument lagu safri karo balse wuxuu qayb ka qaadan karaa nidaamka aan u isticmaalno in aan ku cadeyn aqoonsiga qofka. Baasaboorka kaliya cadeyn ma noqonayo balse markii lagu daro cadeymo kale iyo wixii warqado ah ee uu qofku keeno waxaa loo isticmaali karaa in la isku dayo in ay qofka cadeyn u noqon karaan.
Hadaba jawaabtii waa taas. Sida muuqata waa macno daro waayo Laanta Socdaalka baasaboorka mana aqoonsana cadeyna ma noqon karo, ayadoo xitaa haddii qofku uu keeno cadeymo kale ay aad u adagtahay in qofka Soomaali ah laga aqbalo warqado uu kala yimid Soomaaliya.
Safaaradaha Sweden maxay baasaboorka soomaliga u dalbadaan?
Su’aashaan waxay ka mid ahayd suaalo aan waydiiyay Laanta Socdaalka Sweden wareysigii ugu dambeeyay ee aan la yeeshay balse Laanta Socdaalka ayaysan u suurto galin in jawaabta siiyaan xiligaas ayagoo balan qaaday in ay dib iga siin doonaan jawaabta. Hadaba jawaabtii ayay ii soo direen ayagoo u sharaxay sidatan…
waalaal iid wanaagsan walaal waad ma hadsantahay sidaad wax walba aad nooga haqab tirto walaal waxaan kuwaydiiyay ofkii warqada kenya ama itopi kasameeysta cadeen somali nimo oo max kamad dhaariso oo basa boor horay looga qaaday arintaa ka warama sideey idiin la mooqata igu soo jawaaba waad mahadsantihiin
walaal arintaada maxkamada kenya mid aan horay u maqlay ma ahan balse ma hubo in Sweden ay aqbalayso nidaam nuucaas ah. Waxa kaliya ee ay sheegeen in ay aqbali karaan waa cadeen Soomaali ah oo la bixiyay xiligii dowlada Siyaad barre. wixii intaas ka dambeeyay ma aqoonsana. Mida Kenya ama Ethiopia taas waxaa haboon in aad waydiisid safaarada haday aqbali karaan iyo in Kale.
Walaal waxaan doonayaa in aan ogaado waxaan haystaa dhalashada Sweden mudo 15 sano , waxaan labo bil kahor soo guursaday gabar degen wadanka Masar, mexeey ku kala duwan yihiin hadii uu qofku haysto dhalashada Sweden iyo hadii uu heysto qofka dalbanaaya Främligspass ama uu wadanka joogo wax yar sida 2 Sano. waxaan rabaa in aad ii sheegto hadii aad wax ka og tahay.
November 17, 2010 at 17:11
Axmed inta aan ogahay xaaskaaga waxaa laga doonayaa in ay cadeyso aqoonsigeeda . marka ma caawineysa adiga haddii aad Swedish pass leedahay iyo haddii kale. Caqabada waxay ka taagan tahay Främligspass kii la siin jiray dadka loo dacwooday ee ka soo baxaya afrika ayaa la joojiyay baasaboor Soomaali ahna laguma safri karo. marka waa taas dhibaatada.
sideen ooga hor tegi karnaa Marka Soomaaliud loola macaamaloonaaya si gooni ah ma cunsurad ahaan baa mise anaga ayaa dalabkeena ama beenteena tirada ka badatay? maxaase ka qaban karnaa Ra,yi ahaan ? halkeense ka bilownaa ?
Ciid wanaagsan Farxaan waad mahadsantahay walaal. Axmed runtii waxyaabaha ay Soomaalidu qaban karaan way yartahay, waana la dhihi karaa beenteena ayaa keentay dhibaatada hada haysata bulshada. Way jiraan dadaalo la wado hada oo fara badan, sida mudaharaadyo, dacwooyin, iyo in hayada u dooda xaquuqul insaanka xiriir lala sameeyay. Waa la dhihi karaa xaalku sidii hore ee uu ahaa hore ugu soo laaban maayo balse waxay u badan tahay in ay ogolaan doonaan cidii caruur ay ka jirto Somalia in loo keeno ama caruurtii waalidkooda ay xaga jiraan in loo keeno. Insha Allah
farxaan ahmed siyaad says:
walaalayaan ciid wanaagsan aad iyo aad ayaana u mahad san tihiin mar walba wa aqriya habseedkiina aad iyo aad ayoowna ii qanciyey warar kiisa xaqiiqada ah iyo dadaal ka dfheeriga ah e aad u heysaan walalaha somaliyeed e dhibateysan wana inin salaamaye ciid mabarah kuli bitqeyr
deeq mohamed mouse says:
November 18, 2010 at 18:31
hadaan fikirkeyga raaciyo anigu uma maleeyo iney wax noo tarayaan gaalo waxaan weydiisanaa waayo ilaahay ayaa wax la weydiistaamarka horana waan niwada salaamayaa meel kasta oo aad wada joogtaan walaalaheyga soomaaliyeed . walaalayaal waxad ku dadaashaan sidii soomaaliya aan xal uga heli leheen dadka aan waxba galabsan ee maalin walba lagu leynaayo soomaaliya , walaalayaal bal fikira , isweydiiya maxaan ku dagaalameynaa, oo waayo arka haku fikira waligiin inaad gaal guudaneysaan subxaanalaah waanan niwada salaamey